कर्णालीमा कुष्ठरोगका बिरामीको अवस्था कस्तो ? (अन्तरवार्ता) – Online Jagaran
सुर्खेत, १५ साउन (जागरण) । नेपाली समाजमा कुष्ठरोगलाई पुर्वजन्मको पाप भनी यो रोग लागेका व्यक्तिलाई तिरस्कारका दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । यो रोग सर्छ भन्ने डरले कतिपय कुष्ठरोगका विरामीलाई घर परिवारदेखि नै टाढा असुरक्षित ठाउँमा राख्ने गरिन्छ ।
कुनै समय कुष्ठरोग निको गराउन धामी–झाँक्रि गर्नेहरु अहिले स्वाथ्यकर्मीको सम्पर्कमा पनि आउने गर्दछन् । यसै सन्दर्भमा हामीले कुष्ठरोगका बिरामीको उपचार गर्दै आएको साईनिङ्ग अस्पताल सुर्खेतका ईन्चार्ज मंगलबहादुर थारुसँग कुराकानी गरेका छौँ । उहाँलाई जागरणकर्मी चाँदनी कठायतले सबैभन्दा पहिला अहिले साईनिङ्ग अस्पतालले कस्ता सेवाहरु प्रदान गरिरहेको छ भनेर सोध्नुभएको छ । सुन्नुस् यो कुराकानी (अडियो) ।
कर्णालीका एक मात्र महिला मेयर सेजुवालका योजना कस्ता ? (अडियोसहित)
२७ मंसिर २०७७, शनिबार १९:५५ December 12, 2020 जागरण